Pedyo neChinyararire chibooreso Fekitori - China Pedyo Chinyararire chibooreso Vagadziri, Vatengesi
Chigadzirwa Zvimiro X8 Chinyararire Drill uchishandisa yakawanda yezvinhu-inotora zvinhu, yakaderera ruzha, zviri nyore kucherechedzwa. Mudiki, inotakurika, unogona kushanda munzvimbo diki mukati meyakaomarara. Nechiedza chemwenje che LED kuitira nyore kuchera kwakadzika kuferefeta uye kuyerwa. Yakapusa, yakajeka uye inochinjika, kuchera kumhanya, torque uye mamwe maitiro. Chinangwa chikuru uye kushandiswa X8 Chinyararire Drill chinonyanya kushandiswa mumauto nemapurisa anopesana nekubira, kuferefetwa kwehugandanga uye mamwe missio akakosha ...
Chinyararire Drill nemaviri mota
1.Introduction C8 hunyambiri mota chinyararire chibooreso chiri chemberi chakaderera ruzha chekuboora michina.Mukuita kuita basa, mapurisa anogona kuchera maburi pamadziro neine runyararo yemagetsi chibooreso chisina kuongororwa nemakororo uyezve kushandisa nyanzvi michina ( Nyoka, nezvimwewo) Kuongorora mamiriro ari mumba, kunyanya kuburikidza nemadziro kuti uone zviitiko zvevashandi vekamuri.Iyo inobatsira kumapurisa nekukurumidza uye nemazvo kupinda kumuvengi, inoshandiswa mune dzakasiyana siyana ...
Chinyararire chibooreso C7
Pfupiso C7 padhuze chinyararire chibhorani chinonzi zvakare chakaderera ruzha chiboora. t ndeyekutsigira ugandanga, kununura vatapwa kana mamiriro ekuongorora. Icho chinyararire chinyararire chinogona kuboora pamadziro pasina kukwezva tsotsi kutarisisa uye kuisa iyo nyoka ziso kuongorora kuti uone mamiriro acho ezvinhu. Chigadzirwa chiri muchikwama chekutakura. Zviri nyore kumisikidza uye kushanda. Iyo yese seti sisitimu yakaiswa mune yekutakura kesi inoiswa nekukasira uye kushanda zvirinyore. Kune matatu mafambiro emhando, kusanganisira yekuzvifambisa yega, ma ...